တကယ်ချစ်တာပါဆို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » တကယ်ချစ်တာပါဆို	10
Posted by တောတွင်းပျော် on Dec 2, 2014 in Poetry | 10 comments
တောထဲကထွက် online ပေါ်ရောက်တော့ဖတ်စရာတွေက
အများသား။ mail တွေကိုစစ် စာပြန်သင့် တာတွေပြန်..
facebook ထဲဝင် like တွေ လျှောက်ပေး comment ရေးနဲ့ ..
နောက် ထုံးစံအတိုင်း တစ်စုံတစမယောက်ကို..
တွေ့ ပြီ…တွေ့ ပြီ! နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲဆိုး မိတ်ကပ်ထူထူလိမ်းထားတဲ့
အသက် ၃၀ ကျော်စ အပျိုရိုင်းမလေးတစ်ယောက်..
ကျနော် သူ့ ကိုသဘောကျမိတယ်။
ဒီတော့ခလုပ်လေးတွေနှိပ်ပြီး စာသဝဏ်ပါးလိုက်ပါတယ်။
ခူးဆွတ်လို့တစ်သက်ရွယ်ပန်
အပျိုရိုင်းမလေးနှုတ်က စကားတွေ ထွက်ကျလာတယ်။
နင်တို့ ယောက်ျားတွေ online ပေါ်ရောက်လာရင် လျှာရိုးမရှိတိုင်း တဲ့ ။ ပြောမယ့် သာပြောတာ အတွင်းသဘောက မနောပီတိဖြာနေပုံပဲ။ နေအုံးလေ ကဗျာက
မောင့် ကေဟာ ကတုံးမို့ 
ခွာတစ်ချက် ပေါက်သံနဲ့ အတူ အပျိုရိုင်းမလေးရဲ့နှာမှုတ်သံ
အလကား စတာပါ မမလေးရယ်။ အခု တကယ်ပြောပါ့ မယ်။
မကိုလေ ပျော် မညာဘူး
အိမ့် ဝက်မကြီး မီးနေစဉ်က
သူ့ သားပေါက်လှ တစ်ကောင်ကိုလေဗျာ
မကိုလေ ရည်စူးလို့ 
ဒီတစ်ခါတော့အပျိုရိုင်းမလေး တကယ်တင်းသွားပြီ။
သေနာတောကောင်! ငါ့ ကို ပန်းနဲ့ နှိုင်းလိုက် ဝက်နဲ့ နှိုင်းလိုက်
ခု အဲဒီဝက် ဘယ်မှာလဲ။ သူ့ ပုံစံက တောတွင်းပျော်နဲ့ဝက်ကလေးကို အရှင်လတ်လတ် ရောသင်္ဂြုလ် မြေမြုပ်လိုက်ချင်ပုံ။ မဖြစ်ချေဘူး အမြန် ပြန်ဖြတ်ချမှ။
ပျော့် ဖေဖေ ရောင်းတုတ်လိုက်ပြီမို့ 
ခင်ဇော် says: ပျော့် ကလေးးးမ က ဝက်သားးးဒုတ်ထိုးးး စားးးချင်တာနေမယ်။
တောတွင်းပျော် says: ဝက်သားဒုတ်ထိုးဗန်းလေးထဲမှာ တောတွင်းပျော်ဒုတ်ထိုး တုံးလုံးလေး
လှဲနေတာ ပိုမြင်ချင်လိမ့် မယ်ထင်ပါ့ ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ခွိ !!! ကိုတောပျော်ရ ခင်ဗျားက လျှာအရိုးမရှိတိုင်း ပြောတဲ့အဆင့်မကတော့ဘူး။
လျှာကို အရိုးတပ်ပြီး မွှေလိုက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီဗျ။
ဒီကဗျာလေးဖတ်ပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ ကြည်နူးပျော်ရွှင်ရတာမို့
ရေးနိုင်တဲ့ ကိုတောပျော်ကို ဦးညွတ်ပြလိုက်ပါတယ်
တောတွင်းပျော် says: ကိုအလင်းဆက်!
ကျနော်က ဖတ်လိုက်ရင်ပြုံးစေ ပျော်စေမျိုးကို ရေးချင်တာ။
ကိုကြောင်ကြီးကို အားကျပါ့ ။
kyeemite says: .တကယ်ချစ်တာပါ
တောတွင်းပျော် says: ဖနောင့် နဲ့ ထပေါက်ချင်အောင် ရေးတဲ့ သူကို
အခုမျိုး မေတ္တာထားနိုင်သေးရင်တော့ …
ခင် ခ says: မောင်ကေသာ ကတုံးထက်ဝယ်
Kaung Kin Pyar says: ဆိုးလို့သာ ဆိုးစေကွယ်…
ဦးကြောင်ကြီး says: ခလေးမ
မြစပဲရိုး says: တကယ်ချစ်တာပါဆိုတာ အဲ့ ဝက်ပေါက်လေး ကို ပြောတာလား ဟင်။